Mukadzi anozodza Jesu muEvangeri
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Mukadzi anozodza Jesu muEvangeri
Mukadzi anozodza Jesu muEvangeri
MuEvangeri rega rega, mune chiitiko chemukadzi anozodza Jesu. Mune mamwe maBhuku eEvangeri anomuzodza mumusoro asi mune mamwe anomuzodza tsoka dzake. Kutsanangurwa kwezviitiko izvi kunounza kukakavara pakati pemaKristu nevanovapikisa zvakare. MaKristu anoita seanosungirwa kubatanidza zviitiko izvi sechinhu kana chiitiko chimwechete nekusimbisa kufanana kwazvakaita asi vachifarawo kusatarisa kurwisana kwazvinoita. Mikana iripo inobva yazadziswa nenyaya dzetsika dzechinyakare nedziva remimwe mifungiro yevanhu. Neimwe nzira vanopikisa nemufaro, vanobva vanongedzera kurwisana kunoita zviitiko izvi nekuda kwavo kukuru kwekudzikisira Bhaibheri.
Kana tikavimba neruzivo rwedu isu vanhu chete; chakavanzika ichi hachigoni kugadziriswa. Bhaibheri iBhuku rakanakisa risina kukanganisika mariri. Kuyananisa izvi nechinhu chikuru chekuti zviitiko izvi zvakasiyana asi neimwe nzira zvichiyanana, uye zvichivimba nekukurudzira zaruriro, muono wakanakisa muhurongwa hwaMwari kunozivisa uye kusimbisa kuita kwakanaka uye kwakakwana kweShoko rake.
MaBhuku mana eEvangeri haasingori zviitiko zvina zvevanhu zvakasiyana zvehupenyu nenguva yaJesu Kristu yaaive panyika nekuti Mweya Mutsvene umwechete wakakurudzira mumwe nemumwe wevanyori vana. Vanyori ava vaive vasingatipi kunzwisisa kwavo ivo, vaive vakafemerwa kuti vanyore ruzivo rwaMwari. Saka Mwari aiedza kutiudza chimwe chinhu nenzira yemisiyano yezvaakaita kuti vanyore.
II Petro 1:21 Nokuti hakunovuporofita bwakatongovuya nokuda kwomunhu, asi vanhu vatsvene vaMwari vakataura, vachimutswa noMweya Mutsvene.
II Timotio 3:16 Rugwaro rwose rwakapfurikidza naMwari, runobatsira pakudzidzisa, nokuraira, nokururamisa, nokuranga kuri mukururama.
Nei kusina chiitiko chimwechete, Bhuku rimwechete reEvangeri rinezvese zvakaiswa mariri menzira yezvinyorwa yakanaka? Kana mukafananidza maBhuku eEvangeri munowana zvimwe zviitiko mune rimwe mozvishaya mune rimwe uye maitikiro azvo anoita seanorwisana dzimwe nguva. Zvingadai zvisina kubvisa kukakavara kuzhinji here kana kuti kuturikirwa kwawo zvisina kunaka dai rakanga riri Bhuku rimwechete reEvangeri? Pachinzvimbo zvisinei, Bhaibheri, nerunako rwaro rusina nguva, rakasimbirira pakuzivisa hunhu hwaJesu Kristu kwatiri kupfurikidza maBhuku mana eEvangeri. Kufunga kwevanhu kune miganhu saka Mwari akauya panyika pahwaro hwedu isu vanhu kuti azvitsanangure. Mweya Mutsvene wakakurudzira vanhu kuti vanyore Bhaibheri. Kunyange Mweya Mutsvene uchishanda nenzira inoshamisa kukurudzira, isu vanhu tine miganhu zvakanyanya pakutsanangura huMwari hwose nguva imwechete. Saka Mwari akazvizivisa hunhu hwake zviri nyore mukuzviratidza kuna akaita vadzidzi vana vakasiyana kuti umwe neumwe wavo atsanangure chikamu chimwechete chehunhu hwake.
I Timotio 3:16 Hakuna ungaramba kuti chakavanzika chokunamata chikuru kwazvo, chokuti: Iye wakaratidzwa panyama
Mateo akaonesa Jesu saMambo uye "seShumba yerudzi rwaJuda" apo akaronda dzinza raJesu rakamubatanidza namambo mukuru wekutanga wavaIsraeri, Mambo Davidi. Marko, nzombe kana mhuru, akatiratidza Jesu seMuranda aive akazvipira uye achitambudzika. Ruka n'anga, akasimbira panaJesu seMunhu akarurama, humunhu hwaMwari. Pekupedzisira, Johane, nemuono wegondo, akatipa kunzwisisa kuri pamusoro peMweya apo akazivisa Jesu saMwari. Saka murunako rwekunyorwa kwakaitwa maBhuku mana eEvangeri aya, mumwechete uye iye oga Jesu ndiye ari kuratidzirwa. Rutivi rwakasiyana rweHushumiri hwaJesu huri kupihwa kuti husimbise hunhu hwemweya humwe nehumwe hwaMwari. MaBhuku mana eEvangeri akamiririrwa nezvisikwa zvipenyu zvina, zvinomiririra simba reMweya wakapoteredza chigaro chaMwari cheHushe, muBhuku raZvakazarurwa. Ngatizvitarisei.
Apo muprofita Danieri anotaura hope dzaakarota pamusoro penguva yaizouya tinodzidza kuti chisikwa chipenyu chega chega chaaiona chaimiririra simba. Masimba akaonekwa naDanieri aive panyika. Aimiririra hushe hune hutsinye hwezvematongerwo enyika hwakasimuka pakutonga rudzi rwevanhu huri pasi pekurudziro yaSatani huchizowira pasi. Munokwanisa kuverenga zvakawanda pamusoro peizvi muchidzidzo chinotevera:
Vose Ezekieri naJohane vaiona zviratidzo zvechigaro chehushe kudenga nemasimba emweya aya (Shumba, Nzombe, Munhu, neGondo). Zvipenyu izvi zviri kudenga zvakapoteredza chigaro chaMwari chehushe saka zvinofanira kumiririra hunhu huna huna hwemweya hwakasiyana hwaJesu Kristu.
5 Napachigaro chovushe pakanga pachibuda mheni, namanzwi, nokutinhira; nemwenje minomwe yakanga ichipfuta pamberi pechigaro chovushe, iri Mweya minomwe yaMwari.
6 Pamberi pechigaro chovushe pakanga panegungwa rakavonekera, rakafanana nekristaro; napakati pechigaro chovushe, napamativi ose echigaro chovushe, pakanga panezvisikwa zvina zvipenyu, zvizere nameso mberi neshure kwazvo.
Vakuru makumi maviri nevana vakamiririra madzitatenguru akapa mazita awo kumarudzi eIsraeri gumi nemaviri nemapostora gumi nemaviri akatanga kereke yeTestamente Itsva. Mweya minomwe inomiririra hushumiri hunomwe hwaizoshandiswa naMwari kutungamiririra kereke mukati memakore 2 000 enhorondo yekereke sezvo kereke yaizosangana nemiedzo yakasiyana uye njodzi dzakasiyana siyana. Saka zvisikwa zvipenyu zvina zvinoshandidzana nemaJuda muTestamente yekare uye nekereke kubva payakatanga muTestamente Itsva zvikafamba nayo munguva yese yenhorondo yekereke. Hunhu hwaMwari haushanduki. Anogara ari zvaari nguva dzose. Nzira dzaanoshanda nadzo ndidzo chete dzinoshanduka.
Maraki 3:6 "Nokuti ini Jehovha handishanduki,
Ezekieri 1:5 Zvino mukati mazvo mukabuda zvakanga zvakaita sezvipenyu zvina. Zvakanga zvakadai: Zvakanga zvakafanana nomunhu;
6 Chimwe nechimwe chaiva nezviso zvina, nechimwe nechimwe chazvo chaiva namapapiro mana.
10 Kana zviri zviso zvazvo pakuonekwa kwazvo, zvaiva nechiso chomunhu; zvose zviri zvina zvaiva nechiso cheshumba kurutivi rworudyi; zvose zviri zvina zvaiva nechiso chenzombe kurutivi rworuboshwe; zvose zviri zvina zvaiva nechiso chegondo vo.
KumaJuda Ezekieri akavona zvisikwa zvipenyu zvose chimwe nechimwe chiine zviso zvina. Hunhu hwaMwari hwose hunoratidzwa kuvaIsraeri nguva imwechete. Izvi zviri nyore sezvo vaive rudzi rumwechete muruvoko rwaMwari, rudzi rumwe panzvimbo imwechete nguva imwechete. Kereke yeTestamente Itsva inoshanda zvakasiyana neizvi, vakapararira nepasi rese, umwe neumwe munguva dzakasiyana uye hurongwa hwaMwari pamusoro pekereke hunotora makore 2000 enhorondo yekereke, saka zvakaparadzirwa kana tichitarisa nguva. Chisikwa Shumba chinomiririra maprofita aiudza Israeri Shoko raMwari chidimbu nechidimbu apo nhorondo yeIsraeri yaifambira mberi. Asi kukereke, chisikwa Shumba chinomiririra Testamente Itsva yevapostora yakanyorwa zvakazara pakutanga kwekereke. Saka chisikwa chimwe nechimwe chinobva chamiririra nguva yakasiyana nezvimwe munhorondo yekereke. Mumashure meBhuku raZvakazarurwa, kwaive kusisina Gwaro rekuwedzera pamusoro peTestamente Itsva kukereke. Pakazobva vakuru vemakereke paBhaibheri vakatanga kudzidzisa tsika dzevanhu nezvido zvemasangano saka nguva yeShumba inozopera apo maKristu anotanga kutora zvakataurwa nevanhu pachinzvimbo cheBhaibheri.
Nzombe inozomiririra kutambudzika nekuuraiwa kwemaKristu muNguva yeRima.
Saka Johane akaona zvisikwa zvipenyu zvina zvichiratidza kuti Evangeri rega rega richisimbisa kufanana nemhuka imwechete kutsanangura hushumiri hwaJesu kana nguva yenhorondo yekereke.
Izvi zvinomiririra kuti mweya wakasarudzwa unomiririra Mwari waive uye uripo munguva yakatarwa munguva dzemakereke uye kurwisa mweya unoenderana nebasa rawo unobva kunaSatani.
Kuti muwane muono mukuru wekuti maBhuku mana eEvangeri anokwana sei mumuono mukuru wezaruriro yaMwari ndapota verengai chidzidzo ichi:
Varindi Vana vakapoteredza Chigaro chaMwari Chevushe.
Ezekieri 1:15 Zvino ndakati ndichitarira zvipenyu izvo, ndikaona gumbo rimwe rengoro riri pasi kurutivi rwezvipenyu izvo, kurutivi rumwe norumwe rwezviso zvacho.
16 Makumbo awo pakuonekwa kwawo nomuitirwo wawo zvakanga zvakafanana nebheriri; ose ari mana akanga akafanana; pakuonekwa kwawo napamuitirwo wawo zvakanga zvakaita segumbo rimwe riri mukati merimwe gumbo.
Ezekieri ari kutsanangura “muitirwo” wemweya wezvipenyu izvi waiita kunge wakafanana negumbo riri mukati merimwe gumbo. Zvipenyu izvi zvinoyanana nemaBhuku mana eEvangeri uye basa remaBhuku eEvangeri nderekuzivisa Jesu Kristu kwatiri. Saka tinotanga kunzwisisa kuti zaruriro dzemweya dzakakosha sei. Jesu anovaka kereke yake pamusoro pezaruriro dzemweya zvichibva kunaMateo 16:13-20. Kuona kwatinoita chokwadi muBhaibheri, ndikowo kukura kunoita zaruriro sezvo pfungwa dzinowedzera pamusoro pedzimwe towana kunzwisisa kwakadzama kwekuti Mwari anoshanda sei. Mwari ane hurongwa hukuru (gumbo rekunze) hwatinofanira kugarokoshesa. Kana tikangorangarira nekutenda muhurongwa hwake hukuru chinhu chikuru (gumbo pakati perimwe gumbo) chinoziviswa muhurongwa hukuru. Zaruriro ichivakwa pamusoro peimwe zaruriro. Hurongwa hukuru haushanduki zvachose. Kristu anoshandisa masimba ake eMweya mana kupfuura nguva yenhorondo yekereke kuti achengetedze muviri wekereke kubva kumweya yesimba raSatani. Kristu achabvisa Kereke Mwenga wake nguva yeKutambudzika kukuru isati yatanga pakukwira kudenga kwevatsvene ipapo Satani achatonga nyika kwemakore matatu nehafu. Evangeri rinobva razodzokera kumaJuda Kristu anozodzoka paAmagedhoni kuzoparadza muvengi waIsraeri otanga makore 1000 ekutonga kune runyararo nevatsvene vake. Nguva iyi kazhinji inodaidzwa kuti Mereniyamu.
Saka kushandisa mutemo uyu wezaruriro ichivakira pamusoro pezaruriro Mwari anobva asimbisa kunzwisisa kwedu kwehurongwa hwake hukuru kwakanaka. Ngatishandisei izvi kutarisa nyaya inoita seinorwisa yemukadzi akazodza Jesu muEvangeri.
Zvichibva pazvidzidzo zvizhinji paintaneti, pane zviitiko zvitatu zvakasiyana, apo mukadzi anozodza Jesu mumusoro mumba maSimoni aive memaperembudzi kuitira “kuvigwa kwake”. Chiitiko chechipiri chiri kuna Ruka apo mukadzi akazodza tsoka dzaJesu. Chiitiko chechitatu uye chekupedzisira chiri kuna Johane, apo Maria wekuBethani akazodza tsoka dzaJesu. Tebhuru yekufananidza zviitiko izvi tichaipihwa kumberi muchidzidzo chino.
Ngatitangei kutarisa zviitiko zviri kuna Mateo naMarko:
Mateo 26:6 Zvino Jesu wakati ari paBetania mumba maSimoni wamaperembudzi.
7 Mumwe mukadzi akavuya kwaari nechinu chearbastera chaiva nechizoro chinomutengo mukuru. Akachidurura pamusoro wake agere pakudya.
8 Asi vadzidzi vake vachizvivona, vakafa neshungu vakati, kuparadzwa kwakadaro kwaitirweiko?
9 Nokuti chizoro ichi chingadai chatengeswa nemari zhinji ikapiwa varombo.
10 Asi Jesu achizvinzwa akati kwavari, munotambudzireko mukadzi uyu? Nokuti wandiitira basa rakanaka.
11 Nokuti varombo munavo nguva dzose asi ini hamuneni nguva dzose.
12 Nokuti zvaakadira chizoro ichi pamuviri wangu wakazviitira kuvigwa kwangu.
13 Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kose kunozoparidzirwa Evhangeri iyi panyika dzose izvi zvakaitwa naye zvicharebwavo. Vamurangarire nazvo.
Zvino kuna Marko:
Marko 14:3 Zvino wakati paBetania, mumba maSimoni wamaperembudzi, avapakudya, mumwe mukadzi akavuya anechinu chearbastera chaive nechizoro cenardo chakanakisa chine mutengo mukuru; akaputsa chinu cearbstera, akachidurura pamusoro wake.
4 Asi vamwe vakanga varipo vakatsamwa pamoyo yavo, vakati: Kuparadza ikoko kwechizoro kwakaitirweiko?
5 Nokuti chizoro ichi chingadai chatengeswa namadhenari anopfuvura mazana matatu,* akapiwa varombo Vakatsamwira mukadzi.
6 Asi Jesu wakati: Muregei. Munomutambudzireiko? Wakandiitira basa rakanaka.
7 Nokuti varombo munavo nguva dzose, nguva ipi neipi yamunoda, mungavaitira zvakanaka; asi ini hamuneni nguva. Dzose.
8 Wakaita paakagona napo; wakagara azodzera muviri wangu kuvigwa.
9 Zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Kwose kunozoparidzirwa Evhangeri panyika dzose, zvakaitwa naye zvicharebwa vo, vamurangarire nazvo.
Izvi zviri pachena kuti ichi chiitiko chimwechete, nevanhu vamwechete vaivepo panzvimbo imwechete panguva imwechete. Izvi zvakaitika mazuva maviri zuva rePaseka risati rasvika zvichibva kuna Mateo 26:2 naMarko 14:1. Bhaibheri rinotaura nezvemukadzi, saka hatizivi kuti aive ani. MuBhaibheri mukadzi anomiririra kereke:
Simoni aive nezita raaizivikanwa naro; “Simoni wemaperembudzi”. Zvinoita sezvinoshamisa kuti Jesu, murapi mukuru, angashanyire Simoni wemaperembudzi akasamurapa. Jesu zviri pachena kuti haana kumurapa nekuti angadai asina kuramba achidaidzwa nezita iroro. Nei Jesu asina kumuporesa? Zvichienderana nezvaiitika, Simoni zvinoreva kuti “kuteerera”. Mukadzi kana kereke inofanira kuteerera. Kuteerera zvinotaura Mweya sezvo zviine chirevo chakadzama. Mateo naMarko anomiririrwa neShumba nechisikwa chakaita seNzombe zvataona kusikare kuna Zvakazarurwa naEzekieri. Izvi zvaivewo zvisikwa zvipenyu zviviri zvaichengetedza nguva ina dzekutanga dzemakereke. Kereke yekutanga yakatanga muBhuku raMabasa Avapostora zvikatora Evangeri pamuviri zvekuti vakariparidza nekusatya pasi peruchengetedzo rwesimba rakaita serechisikwa Shumba. Kereke yakabva yatanga kubva pachokwadi cheBhaibheri apo vanhu vaitenda pachokwadi vakabva vatanga kuuraiwa zvakanyanya. Kubva kwakanyanya kwaiita kereke sebato pachokwadi, ndiko kukurawo kwaiita kuuraiwa kwevanhu vaitenda pachokwadi kusvikira kereke yeRoman Catholic yakauraya vanhu vanosvika makumi emamiriyoni muNguva yeRima. Munguva yakaipa iyi, Mwari akachengetedza vatendi vechokwadi neMweya wesimba rakaita serenzombe. Nzombe chisikwa chinotakura mutoro chinozourairwa nyama yacho kana chapedza basa racho rekutakura mutoro. Saka vatendi vechokwadi vakapihwa simba rekugona kukunda mutoro wakaipisisa wekurwadziswa uye vakashaya kutya zvinodadisa vakafira kutenda kwavo uye zvapupu zvavo. Hurwere hwaSimoni, maperembudzi chirwere chinotyisa chinodya nyama yako kusvikira wafa. Ichi chiprofita chemamiriro ekereke kubva panguva yayakatanga muBhuku raMabasa kusvika Nguva dzeRima dzadarika. Madzimambo eRoma akauraya maKristu mamiriyoni matatu pakati pa64 AD na 312 AD. Zvino kereke yeCatholic yakabva yatanga kuuraya kwayo “vaiipikisa” vaitenda mune zvavaidzidziswa neBhaibheri chete.
Tikaramba tichiverenga tinoona kuti Musoro waJesu wakazodzwa kwete tsoka Dzake sezvakaitika pane zvimwe zviitiko kuna Ruka naJohane. Kumwe kutsanangura kuri padandemutande reintaneti zvichiburitsa izvi sekuburitsa zviitiko zezvimwe zviitiko, zvichionesa tsika. Asi Bhaibheri rakanaka uye rine chokwadi chese kutarisira zvinhu izvi pasi kunotisvitsa pakuguma kwekuti takapesana nezaruriro. Kuzodza nemafuta kunotaura pamusoro peMweya Mutsvene. MuTestamente Yekare madzimambo aizodzwa mumisoro yavo (Verengai izvi kubva pakuzodzwa kwaSauro nekwaDavidi). Saka mukadzi uyu (kana kereke) akazodza Jesu saMambo. Bhuku raMateo rinoratidza Jesu saMambo. (Shumba inozivikanwawo samambo wezvisikwa nekuda kwekutaridzika kwayo kunodakadza, kudzova uye simba rayo rinotyisa). Zviitiko izvi zvaive chiprofita chekuti Kristu aizorambwa saMambo uye Musoro wekereke mumasangano otsiviwa nehutungamiri hwevanhu kusvikira kereke yava pasi pehutongi hwevanhu hwakazara pasi pekereke yeRoman Catholic. Kwese kuna Mateo naMarko, Jesu anotaura kuti “Muviri” wake wakazodzwa kuitira kuvigwa asi waive musoro wake wakazodzwa. Muviri unomiririra kereke:
Vakorose 1:18 Ndiye musoro womuviri, ndiyo kereke; ndiye wokutanga, dangwe ravakamuka kuvakafa; kuti iye ave mukuru pazvinhu zvose.
Muviri waizofa muNguva yeRima, asi musoro haufi. Makereke emasangano aizoramba ari pasi pehutongi hwevanhu asi kuvatendi vechokwadi vakarambwa, Kristu anoramba ari Musoro wekereke wechokwadi.
Zvakaitika pechipiri kuna Ruka apo mukadzi akazodza tsoka dzaJesu. Chiitiko ichi chinosiyaniswa nezvimwe zviitiko zviviri nekuti hachina kuitika mazuva maviri zuva rePaseka risati rasvika rinova rakazoitika kuna Ruka Chitsauko 22. zvakare, chinhu chekuti Ruka aive n’anga, zvinoreva kuti aive asingazopesane nekuita ruzivo rwekuti Simoni aive nemaperembudzi. Tichiwedzera, mukadzi kuna Mateo naMarko akazodza Musoro waJesu kwete tsoka dzake. Asi chakafanana muzviitiko izvi zvese ndechekuti paive naSimoni aivepo. Simoni wemaperembudzi akataurwa nezvake kuna Mateo maMarko, Simoni muFarise akataurwa nezvake kunaRuka, uye Simoni baba vaMaria naMarta vekuBethani vakataurwa kunaJohane. Baba vaJudasi vaivewo Simoni.
Ruka 7:36 Zvino mumwe wavaFarise wakakumbira kuti adye naye. Akapinda mumba momuFarise uyo, akagara pakudya.
37 Zvino tarira, muguta iro makanga munomukadzi waiva mutadzi; iye wakati anzwa kuti ugere pakudya mumba momuFarise, akavuya nechinu charbastera chaiva nechizoro.
38 Akamira patsoka dzake mashure make, achingochema, akatanga kunyorovesa tsoka dzake nemisodzi, akadzipisika nevhudzi romusoro wake, ndokusveta tsoka dzake ndokudzizodza nechizoro.
39 Zvino muFarise wakanga amudana, wakati achizviona, akareva mumoyo make, achiti; Munhu uyu, dai aiva muporofita, ungadai aiziva mukadzi uyu unomubata kuti ndiani, vuye kuti wakadini, nokuti mutadzi.
40 Ipapo Jesu akapindura, akati kwaari: Simoni ndine shoko newe, Akati: Revai henyu, Mudzidzisi.
41 Jesu akati: Vanhu vaviri vakanga vanechikwerete kumunhu m umwe; mumwe wakanga anechikwerete chamadhenari anamazana mashanu,* mumwe chamakumi mashanu.
42 Vakati vashaiwa chokuripa nacho, akangovakangamwira vose vari vaviri. Zvino ndoupiko kwavari uchanyanya kumuda?
43 Simoni akapindura, akati: Handiti ndiye wakakanganwirwa zvizhinji here? Akati kwaari: Wareva kwazvo.
44 Zvino akatendevukira kumukadzi, akati kunaSimoni: Unovona mukadzi, uyu here? Ndakapinda mumba mako, ukasandipa mvura yetsoka dzangu; asi uyu wakanyorevesa tsoka dzangu nemisodzi yake, akadzipisika nevudzi rake.
45 Hauna kundisveta, asi uyu chinguri chandapinda, haana kurega kusveta tsoka dzangu.
46 Hauna kundizodza musoro wangu namafuta, asi uyu wakazodza tsoka dzangu nechizoro.
47 Naizvozvo, ndinoti kwauri: Zvivi zvake, zviya zvizhinji, wazvikangamwirwa, nokuti wakada zvikuru; asi unokangamwirwa zvishoma, unoda zvishoma.
48 Zvino akati kwaari: Wakangamwirwa zvivi zvako.
49 Vakanga vagere naye pakudya vakatanga kureva mumoyo yavo, vachiti: Uyu ndianiko unokangamwira zvivi vo?
50 Akati kumukadzi: Kutenda kwako kwakuraramisa; enda hako norugare.
Pamufananidzo waDanieri wemuHedeni tsoka dzinotaura pamusoro pemusanganiswa wevhu nedare, Mwenga waKristu uye Chitendero cheRoman Catholic hazvingasangani. Kubva pakusukwa kwetsoka, tinoziva kuti tsoka dzinotaura pamusoro penguva dzemakereke. Kuti munzwe zvizhinji pamusoro pekuti takasvika sei pakupedzisa tichidai verengani chidzidzo chinotevera chiripowo muchiShona:
Mumashure mekunge kereke yeRoma yapotsa yadzima chokwadi zvakazara kubva pachiso chenyika, Mwari akasimudza murume aive pakati pavo zita rake ainzi Martin Luther kuGermany. Nehutungamiri hweMweya Mutsvene Martin Luther akapikisana zvakasimba nebato rezvematongerwo enyika uye zvechitendero remuEurope rekereke yeCatholic kupfurikidza kutora mharidzo yake muchokwadi chikuru chekuti tinoponeswa nekutenda kwete nemabasa:
Varoma 1:17 Nokuti mairi kururama kwaMwari kunoratidzwa kunobva pakutenda kuchienda kukutenda; sezvazvakanyorwa, zvichinzi: Wakarurama uchararama nokutenda.
Izvi zvakabva zvatanga kuvandudzwa kwezvinyorwa zvakatangwa neveMasangano anopikisa mumakore ana 15 00 vanhu vachibva vasununguka kubva muhunhapwa hwavaive vaiswa nekereke kwemasenturi nguva itsva yechokwadi cheBhaibheri yakabva yajeka kuvanhu.
Asi zvikuru sei zviitiko zviviri zvekugezwa kwetsoka zvakaitika kunaRuka nekuna Johane. Ruka aisimbirira paruzivo rwevanhu apo vanhu vakaita saLuther naJohn Wesley kuEngland vaikwanisa kuverenga Bhaibheri vachidzosa vanhu kuchokwadi cheMagwaro chakaita sekuponeswa nekutenda uye kurarama muhutsvene nekuparidzira. Saka kwaive kutaura pamusoro pekereke ichitambira hutungamiri hweeMweya Mutsvene ichizopedzisira yagamuchira Shoko zvikuru pachinzvimbo chekungotevera tsika nedzidziso dzekereke yeRoman Catholic. Mweya weMunhu (Ruka) waitungamirira kereke. Kereke yechokwadi zvishoma nezvishoma yaimuka kubva murima reNguva yeRima netsika dzavo dzemasangano kupfurikidza Mweya weMunhu. Panguva iyi Simoni aripo zvakare, asi ndeumwe Simoni. Simoni muFarise. Aimiririra hutungamiri hwekereke hune huwori hwaizotanga masangano ese emakereke evakabuda muchiCatholic asi vakangotakura chimiro uye dzidziso dzakaipa dzekereke yeRoman Catholic. Izvi zvaimiririrwa netsoka dzemufananidzo waDanieri wemuHedeni dzakazoramba dzichiparadzana kuita zvigunwe zvakawanda. Apa Jesu haana kubvira ataura kuti kuzodzwa kwaive kwekuvigwa kwake. Asi kukosha kwaive pazvivi zvemukadzi zvaive zvaregererwa. Izvi zvinofambirana nezaruriro yekuponeswa nekutenda yaive naLuther, yakazoparidzwa pasi rese naWesley paakateya nheyo dzenguva huru yemamishinari. Kusimba kwavo panyaya yekutenda kwakapikisa dzidziso yeRoman Catholic yekuponeswa nemabasa.
Simoni mufarise akakosha kutarisa nezvake. VaFarise vaive vatungamiriri vechiJuda vakakosha. Asi Jesu naJohane Mubapatidzi, muprofita wechokwadi, havana kubvira vataura chinhu chimwe chakanaka pamusoro pevaFarise.
Mateo 3:7 Asi wakati achivona vazhinji vavaFarise navaSadhuse vachivuya kuzobhabhatidzwa naye, akati kwavari vana venyoka, ndianiko wakakunyeverai kuti mutize kutsamwa kunovuya?
Johane, panguva yeKuuya kwaJesu kwekutanga, akadaidza vatungamiri vechitendero vechiJuda vemazuva ake kuti “vana venyoka”, vakatanga kumiririrwa panyika nemurevi wenhema uye mhondi Kaini. Tinofanira kutora kutukwa uku zvakasimba. Izvi zvine zvazvinotiudza pamusoro pevakuru vemakereke panguva yekuuya kwaJesu kwechipiri here? Murevi wenhema munhu anotiudza chimwe chinhu chakasiyana nezvakanyorwa muBhaibheri kutaura ikoko kusimo muMagwaro kunouraya chokwadi. Jesu ndiye Chokwadi.
Chiitiko chechitatu uye chekupedzisira chakasiyana nezvimwe sezvo chakanyatsotaurwa kuti chakaitika mazuva matanhatu tisati tasvika paPaseka, Maria wekuBethani, munhu akazvimiririra, uye akabva ataurwa nezita. Apa Simoni wemaperembudzi kana Simoni muFarise vaive vasipo.
Johane 12:1 Zvino mazuva matanhatu paseka ichigere kusvika, Jesu wakasvika Betania, paiva naRazaro, wakanga afa waakamutsa kuvakafa.
2 Vakamuitirapo chirayiro; Marta akavashandira; naRazaro wakanga ari mumwe wavakanga vagere naye pakudya.
3 Zvino Maria akatora paundi yamafuta enardo, anomutengo mukuru, akazodza tsoka dzaJesu, akapisika tsoka dzake nevhudzi rake; imba ikazadzwa nokunhuwira kwamafuta.
4 Ipapo mumwe wavadzidzi vake, Judhasi Iskarioti, mwanakomana waSimoni wakanga achazomupandukira, akati:
5 Mafuta awa akaregereiko kutengeswa namadhenari mazana matatu,* akapiwa varombo?
6 Asi haana kureva izvozvo kuri kuti wakarangarira varombo, asi nokuti waiva mbavha; waigara nechikwama, achisiba zvaiiswamo.
7 Asi Jesu wakati: Muregei, akadaro wazviitira kuvigwa kwangu.
Johane akataura vanhu vakaita saMaria, Marta, Razaro, Judasi Iscarioti, nababa vake Simoni nemazita.
Hapana vaFarise, vanova vakuru vemakereke, kuti zviratidze kuti chiitiko ichi chaive chichisanganisira makereke ane mazita.
Tinokwanisa kuyananisa chiitiko ichi nekereke yechinomwe uye yekupedzisira apo Jesu akamira kunze kwemusiwo wekereke achitaura nemunhu mumwe nemumwe ari mukereke.
Jesu anoziva makwai ake. Anokwanisa kudaidza rimwe nerimwe nezita raro, sekudaidza kwaakaita Razaro nezita rake. Ndicho chikonzero nei painekukoshesa kudaidza nemazita kumunhu mumwe nemumwe anodavira inzwi rake, pachinzvimbo chenzwi remukuru wekereke.
Jesu haachashanda nekereke seboka. Kereke yenguva yekupedzisira yakaramba Magwaro ichitevera mashoko akabatwa paitaura vanhu vanotungamirira kereke. Izvozvi Jesu ari kudana munhu mumwe nemumwe chete.
Judasi anomiririra rudo rukuru rwemari rwuri muvanhu panguva yekupedzisira. Aidzidzira kuva mupostora, mutungamiri wekereke. Asi, zvakafanana nevatungamiriri vekereke nhasi uno, akapikisa mukadzi aive nezaruriro iri nani pamusoro pezvaiitika pane yaaive nayo iye. Aidawo chinzvimbo chehutungamiri kuti awane mari. Vakuru vemakereke vanoda hupfumi uye hutefetefe.
Nguva imwechete apo Jusu akatsamwa ndepaakatsamwira vatengesi vaive muTemberi vaive vakuru vezvitendero vakakosha vaiita mari kubva muchitendero.
Kuti tinzwisise chiitiko ichi chekuzodzwa nevakachiita tinofanira kudzokera zvishoma kuChitsauko chadarika chinotsanangura kumutswa kwaRazaro kubva kuvakafa.
Johane 11:1 Mumwe munhu wakanga achirwara, wainzi Razaro weBetania, musha waMaria nomukoma wake Marta.
2 Ndiye Maria uya wakazodza Ishe namafuta, akapisika tsoka dzake nevhudzi rake; (hanzvadzi yake Razaro, wakanga achirwara.)
Johane akanongedzera zviri pachena, pamashoko akakomberedzwa, aive Maria upi uye kuti amupatsanure kubva kune vamwe vakadzi vakataurwa kuna Mateo, Marko naRuka.
Johane akanongedzera vanhu vaivepo.
Johane 11:20 Zvino Marta wakati achinzwa kuti Jesu wovuya, akaenda kundomuchingamidza; asi Maria wakagara mumba
Marta anomiririra rudzi rwevaJuda runova varanda vaKristu.
Mapisarema 136:22 Ive nhaka yaIsiraeri muranda wake; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
Isaya 41:8 "Asi iwe Isiraeri, muranda wangu, Jakobho, wandakasanangura, vana vaAbhurahamu shamwari yangu,
Ruka 1:54 Wakabatsira Israeri, muranda wake, Kuti arangarire ngoni dzake
Maria wekuBethani anomiririra mwenga waKristu achatorwa kubva panyika mukukwira kudenga kwakavandika.
Johane 11:21 Marta akati kuna Jesu: Ishe, dai maiva pano, hanzvadzi yangu ingadai isina kufa.
22 Kunyange zvino ndinoziva, kuti zvose zvamunokumbira kuna Mwari, Mwari uchakupai.
23 Jesu akati kwaari: Hanzvadzi yako ichamuka zve.
24 Marta akati kwaari: Ndinoziva kuti uchamuka zve pakumuka nezuva rokupedzisira.
25 Jesu akati kwaari: ndini kumuka novupenyu; unotenda kwandiri, kunyange akafa, uchararama.
26 Mumwe nomumwe uri mupenyu; unotenda kwandiri, haangatongofi, unotenda izvozvo here?
27 Akati kwaari: Hongu Ishe, ndakatenda kuti ndimi Kristu, Mwanakomana waMwari, uyo wainzi unouya panyika.
28 Wakati areva izvozvo, akandodana Maria munun’una wake, akati kwaari vari voga, Mudzidzisi wasvika unokudana.
29 Iye akati achizvinzwa, akakurumidza kusimuka akaenda kwaari.
Chiitiko ichi chaive chiprofita cheKuuya KwaJesu Kristu kweChipiri. Kumuka kwaRazazaro kubva kuvakafa ndiko rudzi rwerumuko rwechipiri ruchaitika vatsvene kana kuti kereke yechokwadi isati yakwira kudenga uye tinokwanisa kudzidza kubva pazviitiko zvinozotisvitsa pakuri kuti tiwane gwara rezvichaitika paKuuya kwaJesu kweChipiri.
Mwenga waKristu anoziva kuti maJuda anomiririra chiringaziva chaMwari. Verengai zvizhinji pamusoro peizvi muchidzidzo chinotevera:
Israeri ndiyo chiringazuva chekumisa kana kutanga kufambisa nguva chaMwari.
Saka zviitiko zvakapoteredza maJuda zvichazivisa Mwenga kuti ava pedyo nenguva yekupedzisira uye kuti vanofanira kugadzirira kukwira kudenga.
Munguva yekupedzisira yekereke chete, Raodikia, patakaona maJuda achidzokera mumusha mavo munyika yeIsraeri. Vakaitwa nyika yakazvimiririra mugore 1948 vakazokunda kutora nzvimbo zhinji dzenyika yavo yekutanga muhondo inoshamisa yemazuva matanhatu yemuna 1967. Vakabva vazorora pazuva rechinomwe sezvaidiwa naMwari muBhuku raGenesisi. Hakuna imwe nyika yemazuvaano yakambokwanisa kukunda hondo nenyika nhatu dzevavengi mumazuva matanhatu. Mwari aive atanga kudzokera kuIsraeri.
Tinoona maVhesi 26 ne 27 anomiririra rudzi rwemaJuda, akanangana nemaJuda 144000 akataurwa nezvawo kuna Zvakazarurwa 7:3-4, vachazoona kuti Jesu Mwanakomana waMwari pakupedzisira uye vachatenda nekumugamuchira saIshe naMuponesi wavo.
4 Ndikanzwa kuwanda kwavakaiswa chisimbiso; vanezvuru zvine zana namakumi mana nezvina, vakaiswa chisimbiso vachibva kumarudzi ose avana vaIsraeri.
Marta “muchivande” vari voga akazivisa Maria kuti Jesu aive auya Vhesi 28. Izvi zvinoreva kuti kune chiri kuitika nemaJuda chichazivisa Mwenga kuti Jesu ari kuuya uye rumuko rwoda kuitika. Zvinorevawo kuti kukwira kudenga kuchava chakavandika chichaziviswa kune avo voga vachave chikamu chako. Kereke yechokwadi inofanira kutarira Israeri zvakasimba.
Hezbollah yakasimuka sehondo ine simba kwazvo muRebanoni vakavenga maJuda. Siria ine mauto echiMosiremu akasimba kwazvo akavenga maJuda. Israeri iri kurarama sei nehondo mbiri dzakaivenga pamiganhu yayo? Hazvisi nyore, kunyange kumauto echiJuda ane simba guru. Saka muna 2011, hondo yemaArabu eSpring yakamukira vakuru vayo ikapararira neSiria. Hondo yemarudzi iyi yakakura kwazvo zvekuti Siria yakakumbira kuti Hezbollah ivabatsire. Kwemakore matanhatu kurwisana kusina tsitsi uku kwakarova maguta eSiria, kuchikonzera kuparara kwezvinhu kukuru uye kwatora kubata kwese kweHezbollah nezvombo zvemauto avo vose Hezbollah neSiria. Saka, netsitsi dzaMwari, Israeri yakasiiwa kwemakore matanhatu nevavengi vaviri vane simba kwazvo. Zvakare Mwari arikuratidza ruvoko rwake rweruchengetedzo pamusoro paIsraeri.
Mwari paanoswedera kuIsraeri, chiratidzo chekuti ava pedyo kutora kereke yake kuti isangane nayo kumakore.
I Vatesaronika 4:16 Nokuti Ishe amene uchaburuka kubva kudenga nokudanidzira, nenzwi romutumwa mukuru, nehwamanda (trump) yaMwari; vakafa muna Kristu vachatanga kumuka.
Kungoitikawo kwazvo here kana kuti chiratidzo chenguva? Izwi rekuti “trump” rakataurwa tisati tasvika pakumuka kwevakafa.
Trump akasarudzwa musarudzo dzakatora nguva refu uye dzairwadza kwazvo dzekuAmerica muna 2016 zvakaita kuti zita rake ritaurwe mumapepanhau kwemwedzi yakati kuti. Hunhu hwake uye maonero ake akasiyana neevanhu vose akaita kuti zita rake “Trump” rive pamisoro yenyaya pamapepanhau. Mwari ari kushandisa shanduko yezvematongerwo enyika iyi kuti atiyambire kuti tava pedyo nenguva yekumuka kwevakafa muna Kristu here?
Pamberi, Jesu akasvika paguva raRazaro:
Johane 11:39 Jesu akati: Bvisai Ibwe! Marta hanzvadzi yeakafa akati kwaari: Ishe, wotonhuhwa zvino, nokuti wava namazuva mana okufa kwake.
40 Jesu akati kwaari: Handina kukuvudza here, kuti kana ukatenda, uchavona kubwinya kwaMwari?
44 Wakanga afa akabuda, akapombwa makumbo namavokonemicheka yobwiro, nechiso chake chakapombwa nomucheka. Jesu akati kwavari: Musunungurei, aende.
Razaro nekumuka kwake kubva kuvakafa kune chimwe chirevo chechipiri uye kunomiririra kumuka kwekutenda muchokwadi mumashure mekufa kwekereke mukati menguva ina dzekutanga dzekereke (aive afa kwemazuva mana). Rangarirai, tichangotanga tataura pamusoro pemutsiridzo yaMartin Luther.
Izvozvi nekuti tine kunzwisisa kuri nani uye nheyo dzakanaka ngatidzokerei pakunotarisa zvinoreva kuzodza kwakaitwa tsoka dzaJesu naMaria wekuBethani.
Maria, akamiririra Mwenga waKristu, kereke yechokwadi, inogarowanikwa iri patsoka dzaJesu.
Maria anogarowanikwa agere patsoka dzaJesu (Maria anowira patsoka dzake (Johane 11:32), anogara patsoka dzake (Ruka 10:3), anozodza tsoka dzake (Johane 12:3).
Izvi zvinoreva kuti kereke yechokwadi, zvisinei nehushoma hwayo, ichatenda chete zvakanyorwa muMagwaro. Maria aiziva kuti Jesu ndiye rumuko nekuti akamutsa hanzvadzi yake kubva murufu. Tarirai Maria haana kuenda nevamwe vakadzi vaviri, vose vaive nezita rekuti Maria kunozodza Jesu kuguva kwake nekuti aitenda kuti Jesu aizomuka kubva kuvakafa. Anozodza tsoka dzake zvinomiririra Mweya Mutsvene mukereke yechokwadi vanova vanhu mumwe nemumwe vakazvimiririra vachamutswa pakupedzisira. Rangarirai tsoka pamufananidzo waDanieri wemuHedeni dzinomiririra nguva dzekereke yevaHedeni. Kuzodza kwakaita Maria tsoka dzaJesu kunotarisa kereke yekupedzisira ichasangana nekupupura chiitiko chekumuka kwevakafa.
Vatsvene vachamutswa vachafamba netsoka dzavo panyika pavachabuda mumakuva avo. Hanzvadzi yake Razaro aive nayo, zvinoratidza kuti kumuka kwekutenda munguva yaMartin Luther kwakatodarika. Kuna Johane 12:7 Jesu anotaura kuti Maria “akachengeta” mafuta aya zvinonongedzera kuMwenga “anochengeta” Mweya Mutsvene achishingirira ari muchokwadi kusvika pamagumo.
Mateo 10:22 Muchavengwa navose nekuda kwezita rangu: asi unotsungirira kusvika pakuguma uchaponeswa.
Saka pachinzvimbo chekurwisana, tinoona chiprofita chinodakadza chichizarurwa. Tiri munguva yekupedzisira yekereke yevaHedeni. Nekukasika kuchaitika kumuka kwevakafa muna Kristu uye kukwira kudenga kwekereke inotenda muBhaibheri. Zvino nyika nevasikana vakapusa vakarara (maKristu emasangano akaponeswa) vachatsvairwa vachipinda munguva yeKutambudzika kukuru, inova nguva yekurwadziwa kusati kwakamboonekwa. Tinofanira kuzadzwa neMweya Mutsvene totsvaga chiedza chechokwadi chiri mumapeji eBhaibheri. Kana tiine mafuta anokwanisa kutipa chiedza, tinozokwanisa kuverenga nekunzwisisa zvakavanzika zvakadzama zviri muBhaibheri. Kana tisingakwanisi kunzwisisa zvakavanzika zvakadzama izvi zvechisikwa -Gondo, tinenge tisina chiedza saka tinenge tisina mafuta. Kusaziva zvakavanzika zvakadzama izvi kunongoreva kuti tiri vamwe vevasikana vakapusa vakarara.
Vaefeso 5:14 Saka iye unoti; Muka iwe uvete, muka kuvakafa, Kristu uchakuvhenekera.
15 Naizvozvo chenjerai kwazvo kufamba kwenyu, kuti murege kufamba savasina kuchenjera, asi savakachenjera.
16 Mungwarire nguva yenyu, nokuti mazuva akaipa.
17 Saka musava mapenzi, asi Muzive kuda kwaShe.
18 Regai kubatwa newaini, nokuti ndipo pane kusazvidzora, asi muzadzwe nomweya.
saKana mukashandisa izvi mumazuva edu, zvino vatungamiri vemakereke havazongotadzi kukunda chete asi vanotoita chokwadi chekuti vese vavanokurudzira havakundiwo.
Saka vakuru vemakereke vanoparidza kutadza kusiri muMagwaro uye nhasi kune masangano 45000 akasiyana emakereke. Kutadza kwazara kwazvo mumakereke, ndiyani achagona kuwana chokwadi cheMagwaro?
MaKristu mazhinji nhasi, vanotenda zvinotaurwa nevakuru vemakereke avo pasina kupikisa, vachavatevera munguva yeKutambudzika kukuru.
Kereke, inotongwa nemufundisi, haina kubva muMagwaro. Shoko rekuti “Mufundisi” (pasita) rakataurwa kamwechete muTestamente Itsva. Saka mufundisi haana simba raanopihwa neMagwaro rekuva musoro wekereke.